मिस्ट्री क्वीन’ नाम दिइएकी लोक गायिका विष्णु माझीमाथि उनका पति सुन्दरमणि अधिकारीले गम्भिर शोषण गरेको प्रष्ट भइसकेको छ ।सुन्दरमणिले उनीमाथि अन्य ज्यादति पनि गरेको हुनसक्ने भन्दै स्याङ्जा प्रशासनले झिकाउन लगायो । सुन्दरमणि आफु पक्राउ हुनसक्ने त्रासका कारण विष्णुलाई लिएर केही अघिल्लो साता स्याङ्जा पुगे ।
त्यहाँ, प्रशासन प्रमुखसँग उनको सवालजवाफ पनि भयो । तर, सुन्दरमणिले त्यो सवाल जवाफका क्रममा दिएका कतिपय उत्तरले विष्णुमाथि उनको एकाधिकार कायम भएको प्रस्टिन्छ ।त्यतिमात्र होइन, सुन्दरमणिको इच्छाका आधारमा मात्र विष्णुु कठपुतली बनिरहेको पनि प्रष्ट हुन्छ । किनकी प्रशासनमा उपस्थित हुँदा नै एउटा अभियुक्त जस्तो कालो कपडाले पुरै ढाकेर सुन्दरमणिले उपस्थित गराए । यहाँसम्मकी विष्णुले आफ्ना बाबुदेखि आफन्तलाई पनि ११ बर्षपछि भेटिन् ।शोषण भनेको यौन अथवा शारिरीक हिंसामात्र होइन, उसको बोल्न पाउने, सार्वजनिक हुन पाउने अधिकारमाथिको हनन् पनि हो ।
माझीको ‘स्वर बेचेर’ अझै गुजारा चलाइरहेका सुन्दरमणि अधिकारीको उत्तरप्रति प्रशासन गम्भिर हुन पर्छ की पर्दैन ? मानवअधिकारकर्मीले बोल्न पर्छ की पर्दैन ? केही जवाफ र त्यसमाथिको दैनिक नेपालको टिप्पणी यस्तो छ ।–प्रहरीसँग नै सुुन्दरमणिको अभिव्यक्ति थियो -उनी बोल्न जान्दिनन्, धेरै पढेकी छैनन् । त्यसकारण हामी सार्वजनिक नभएका हौं ।टिप्पणी : गाउन जान्नेलाई बोल्न नजान्ने भन्न मिल्छ ? उनको गायनको गीतबाट आएको रकमले गुजारा चलाउने, आफ्नो सौख पुरा गर्ने अनि उनलाई दुनियाँबाट बञ्चित गराउन मिल्छ सुन्दरमणिले ?–अन्तरजातिय विहे गरेका कारणले पनि हामी केही खुल्न सकेनौं त्यसैले गोप्यतामा बसेका हौं ।टिप्पणी : नेपालको कानुनले कुनै पनि बिहेलाई मान्यता दिएको छ ।
त्यसमाथि सेलिब्रिटीको वैवाहिक जीवन भन्दा उसको काम महत्वको हुन्छ । उसका प्रशंशकले वैवाहिक जीवनलाई प्रवाह गर्ने भए प्रायः सेलिब्रिटी लुक्नु पर्ने हुन्थ्यो । सुन्दरमणिले यस्तो कुतर्क गर्न मिल्छ ?–प्रहरीसँग नै सुुन्दरमणिको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो । उनले जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए,‘मेरो उद्देश्यअनुसार नै उनलाई मिडियाभन्दा टाढा राखेको हुँ । म केही गर्न चहान्छु !’
टिप्पणी :चर्चित गायिकालाई मिडियामा आउन नदिएर सुन्दरमणिको कुन चाहीँ इच्छा विष्णुले पुरा गरिदिनु पर्ने हो ? बन्दी बनाएर सुन्दरमणिका इच्छा पुरा गरिदिनुपर्ने विष्णुको बाध्यता हो ? उनको मानवअधिकार खोई ?–विभिन्न स्टेज सोका लागि प्रस्ताव नआएका होइनन् । तर, मलाई पनि लैजानु भन्दा विष्णुको मात्र डिमान्ड भयो, त्यसकारण मैले जान दिइन ।
उनी लेखपढ नगरेका कारणले समस्यामा पर्लिन् भनेर ।टिप्पणी : स्टेज सो भनेको स्रोता र दर्शकको मागअनुसार हुन्छन् । हरेक गायकगायिकाका पति वा पत्नीलाई बोलाउन सम्भव हुँदैन । आयोजकले विष्णु माझीको स्वरको पैसा तिर्ने हो, सुन्दरमणिको रमाइलोको होइन । यसकारण सुन्दरमणिको इच्छा पुरा नहुँदा विष्णुले विश्व भ्रमण गर्ने, प्रशंशकको माग पुरा गर्न नहुने ? यो कुन मानवअधिकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ?